लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेपछि रूपन्देही संक्रमणको केन्द्र बनेको छ । यहाँका बुटवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थ नगरमा धेरै संक्रमित छन् ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत धागो कारखाना र भैरहवास्थित भीम अस्पताललाई कोरोना विशेष घोषणा गरिएको छ । दुवै अस्पताल भरिएका छन् ।
बेड अभावमा भुँइमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ संक्रमितले भर्ना नपाउँदा बिचल्ली छ । कतिपय बिरामीले बेडको प्रतीक्षा गर्दागर्दै अस्पतालको फिभर क्लिनिक र आपतकालीन कक्षमै प्राण त्यागेका छन् । केहीको अस्पतालबाट फर्किएर घर पुगेपछि मृत्यु भएको छ ।
कोरोना अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव छ । पहिलो लहरमै ‘हटस्पट’ बनेको जिल्लामा दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार थप्न चासो दिएनन् ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले चिकित्सक र नर्सको पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरे पनि कोही नआएको बताए । ‘पूरै अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गरौं, अझै एक सय बेड थपौं, जनशक्ति दिनूस् भनेर माग गरेका थियौं, थाकिसक्यौं,’ उनले भने, ‘मानिसको ज्यान गइरहेको विषयमा संवेदनशीलता नै देखिएन ।’
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले धागो कारखानामा सञ्चालन गरिरहेको कोरोना विशेष अस्पताल र फिभर क्लिनिकमा मेडिकल अफिसर र नर्स सरकारले तोकेको दरबन्दीको २० प्रतिशत मात्रै छन् । अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले अहिले कार्यरत जनशक्तिले हरेक बिरामीको राम्ररी हेरचाह र रेखदेख गर्न नसकेको बताए । ३२ जना बिरामी भर्ना रहेको आईसीयूभित्र २ जना नर्स कार्यरत छन् । ‘२ जना बाहिरबाट औषधि र अन्य सामान पुर्‍याउन बस्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘३२ जना बिरामीलाई दुई जना नर्सले रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था चरम अभाव हो ।’
सोमवार दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘स्टक राख्ने अक्सिजन सिलिन्डर नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने । जिल्लामा अक्सिजन बिक्री गर्ने व्यवसायी र अक्सिजन सिलिन्डर भएका सबै उद्योगी, व्यवसायीलाई अक्सिजन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको वलीले बताए ।
अस्पतालमा दिनमा १२० सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको र ५०० सिलिन्डर अक्सिजन स्टक चाहिएको उनले बताए ।
‘अक्सिजन नपाएका कारण स्थानीय तहले स्थापना गरेका आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दाङमा बिरामीको संख्या अनुसार दिनमा १ हजार सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन्छ तर अहिले जिल्लाभर ६०० सिलिन्डर मात्रै छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।